कोरोना लागेको जनकपुरकि महिलाले किन पैसा छ रिन् ? | NewsSudur
कोरोना लागेको जनकपुरकि महिलाले किन पैसा छ रिन् ?
जनकपुरमा एकाएक दुई महिलाले पैसा छ रे र भा गे । पैसा फ्यालेपछि त्यहाँ रहेका सर्वसाधरणलाई है रा न भयो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–५ महावीर चोकमा २ महिलाले हिजो (शुक्रबार) पैसा फा लेर भा गेका थिए । प्र हरीले आज उनीहरुलाई प क्रा उ गरेको छ । प क्रा उ पर्ने एक महिलाको आ रडि टि पोजिटिभ देखिएको छ । स्थानीयका अनुसार उनीहरु १० र १ सय रुपैयाँको नोट चोकको विभिन्न ठाउँमा फा लेर भा गेका हुन् । ती महिलाले चोकमा रहेको पसलहरुको सटरमा समेत पैसा राखेका थिए ।
ज था भा वी विभिन्न ठाउँमा पैसा फा लेर भाग्दै गर्दा स्थानीयले प्र हरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले उनीहरुको खो जीमा ति व्रता दिएको थियो । केही दिनअघि भारतमा पनि कोरोना सं क्र मित व्यक्तिले पैसामा थुक लगाएर फालेको भिडियो बाहिर आएको थियो ।
फ्यालेर फ रा र भएको आरोपमा प क्रा उ परेकी दुई महिलामध्ये एक जनाको आरडिटी रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ । कोरोना भाइरस सं क्र म णको सं त्रा स का बीच पैसा फालेर फ रा र भएको भनिएको महिलालाई नि यन्त्र णमा लिई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा गरिएको परिक्षणमा आ रडि टी रिपो र्ट पोजेटिभ देखिएको अस्पताल श्रो तले जनाएको नेपालको चर्चित अनलाईन पोर्टल अनलाइनखबर डट कमले जनाएको छ । उनीहरु दुबैजनाको अहिले पिसिआर टेस्ट भइरहको बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरु दुबैजना नन्द भाउजु हुन् । शनिवार दिउँसो मस्जिद पछाडी लु केर बसेको अवस्थामा दुबैजनालाई प क्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
प क्रा उ गरे लगतै कोरोना सं क्र मण परि क्षणकालागि दुबै जनालाई आरडिटी परि क्षण कालागि प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको डिएसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए । उनीहरुको विषयमा अ नु सन्धा न भइरहेको उनले बताए । शुक्रवार दिउँसो महावीर चोकमा दुइ जना महिलाले पैसा फ्याल्दै हिडेको भन्दै स्थानीयहरु त्र सि त भएका थिए ।
कोरोना भा इर स फैलाउन ती महिलाले पैसा फ्या ल्दै हिडेको भन्दै स्थानीयहरुले प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि प्रहरीले ती पैसा टिपेर कोरोना परिक्षणकालागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पठाएको थियो। ती महिलालाई हेर्नसाथ प्रहरीललाई जानकारी गराउन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सिसिटीभीको आधारमा फोटो सार्वजनिक गरेको थियो ।
आखिर किन फ्या ले नन्द–भाउजुले पैसा
जनकपुरको यो घट्ना सार्वजनिक भएसँगै स्थानियले कोरोना फै ला उनका लागि ती महिलाले पैसा फ्या लेको बताएका छन् । तर, प्रहरीले भने यस सम्बन्धमा अ नु सन्धा न भइरहेको जानकारी दिएको छ ।